AmaNgqina KaYehova Aseza Kuhlala Apha | Incwadi Yonyaka Ka-2015
UJuana Ventura waqalisa ukufunda iBhayibhile ngoxa umsebenzi wawuvaliwe, waza wabhaptizwa ngo-1960 kuMlambo iOzama. Ngenye imini omnye umfundisi waseSanto Domingo wayefuna ukumbambisa kuba wayesithi “umthathela amarhamente.” Ezama ukubonisa ukuba amaNgqina kaYehova ngamaxoki nokuhlazisa uJuana, lo mfundisi wambizela ecaweni yakhe esithi ufuna aye kuphendula phambi kwamarhamente akhe imibuzo ngeenkolelo zakhe ezintsha.
UJuana uthi: “Wandibuza le mibuzo mithathu, ‘Kutheni ningavoti? Kutheni ningayi emfazweni? Kutheni nizibiza ngokuba ningamaNgqina kaYehova?’ Ngoxa ndandiphendula umbuzo ngamnye ngeZibhalo, onke amarhamente akhe ayetyhila iiBhayibhile zawo yaye amangaliswa zizinto awayezifunda. Amaninzi kuwo aqonda ukuba ayifumene inyaniso. Onke aqalisa ukufunda iBhayibhile, yaye ayi-25 kuwo azinikela kuYehova.” Esi siganeko saba nefuthe elihle kumsebenzi wokushumayela eSanto Domingo.
AmaNgqina KaYehova Aseza Kuhlala Apha
Mninzi umbhodamo owenzekayo emva kokugwintwa kukaTrujillo. INcwadi Yonyaka Ka-1963 yathi: ‘Amajoni ayengxange ezitratweni, abantu babeqhankqalaza yaye besilwa usuku emva kolunye.’ Lingalawuleki linjalo elo lizwe, wona umsebenzi wokushumayela wawutyhalela phambili, yaye ngasekupheleni konyaka wenkonzo ka-1963, kwakusele kukho abavakalisi abayi-1 155.
Xa kwafika uNathan Knorr evela kwikomkhulu lehlabathi ngo-1962, walungiselela ukuba kuthengwe isiza ukuze kwakhiwe izakhiwo ezikhulu kuba umsebenzi wokushumayela wawusanda kakhulu. Kwakhiwa isakhiwo esinemigangatho emibini kunye neHolo yoBukumkani kuso. NgoMgqibelo, ngo-Oktobha 12, 1963, umzalwana osuka kwikomkhulu lehlabathi, uFrederick Franz, wanikezela ezo zakhiwo zitsha. Kwacaca mhlophe ukuba amaNgqina kaYehova aseza kuhlala eDominican Republic. Kungekudala emva kokuba zinikezelwe, kwafika uHarry noPaquita Duffield, abathunywa bevangeli bokugqibela ukugxothwa eCuba.
Ulwando Nangona Kukho Uqhushululu
NgoAprili 24, 1965, eli lizwe lalizaliswe luqhushululu. Kwiintsuku ezinzima ezalandelayo, abantu bakaYehova baqhubeka besenza inkqubela. Ngo-1970, kwakukho abavakalisi abayi-3 378 kumabandla ayi-63. Kwiminyaka nje emihlanu, ngabantu abangaphezu kwesiqingatha sabavakalisi ababesele bengene entlanganweni. INcwadi Yonyaka Ka-1972 yathi: “Yayingabantu abahlukahlukeneyo: Abakhandi beemoto, amafama, abaqhubi bezithuthi zikawonke-wonke, abasebenza ngezimali, abakhi, abachweli, amagqwetha, oogqirha bamazinyo, sibala ntoni na, nabantu ababengamalungu ezopolitiko; bonke bahlanganiswa kukuthanda uYehova nenyaniso.”